मध्ययुगीन सहर, साथै समाजमा भयो छ कि अन्य परिवर्तनहरू विकास, सधैं शिक्षामा परिवर्तन सँगसँगै। प्रारम्भिक मध्य युग समयमा यो monasteries मा मुख्य रूप तयार थियो भने पछि हामी खोल्न थाले, र उहाँले व्यवस्था, दर्शन, चिकित्सा अध्ययन जहाँ विद्यालय, विद्यार्थीहरू धेरै अरब, ग्रीक लेखकहरूले कामहरू, र यति मा पढ्नुहोस्। डी
घटना को इतिहास
शब्द ल्याटिन मा "विश्वविद्यालय" अर्थ "totality" वा "संघ"। पुरानो दिनमा, यो यसको महत्त्व गुमाएको छ छैन रूपमा म, आज भन्न पर्छ। मध्ययुगीन विश्वविद्यालय र स्कूल शिक्षक र विद्यार्थीहरूको एक समुदाय हो। तिनीहरूले एक उद्देश्य संग संगठित थिए: दिन र शिक्षा प्राप्त गर्न। मध्ययुगीन विश्वविद्यालयहरु केही नियमहरू द्वारा बाँचिरहेका छौं। मात्र तिनीहरूले स्नातकहरूको सिकाउन सही दिने, डिग्री दिनु सक्छ। त्यसैले यसलाई मसीही युरोप को सबै थियो। प्रसिद्ध, emperors वा राजा, त्यो छ, जो त्यतिबेला एक उच्च अख्तियार ती - हामी यस्तो सही तिनीहरूलाई स्थापित गर्ने ती को मध्ययुगीन विश्वविद्यालयहरु पाए। यस्तो विद्यालय आधार सबैभन्दा प्रसिद्ध Monarchs एट्रिबिउट गरिएको छ। यसलाई उदाहरणका लागि, विश्वास छ कि विश्वविद्यालय ओक्सफोर्ड को, अल्फ्रेड महान् र पेरिस द्वारा स्थापित - कार्ल Veliky।
रूपमा मध्ययुगीन विश्वविद्यालय प्रबन्ध मिलाइयो
टाउको मा सामान्यतया Rector थियो। आफ्नो स्थिति ऐच्छिक थियो। बस हाम्रो समय मा जस्तै, मध्ययुगीन विश्वविद्यालयहरु विभाग विभाजित थियो। तिनीहरूलाई प्रत्येक को डीन द्वारा लाग्यौं। पाठ्यक्रम को एक निश्चित संख्या सुनेर पछि विद्यार्थीहरू बीए र सही मालिकको बन्न र शिक्षा पाए। एकै समयमा तिनीहरूले अध्ययन जारी राख्न सक्नुहुन्छ, तर छलफल "उच्च" क्षेत्र चिकित्सा, व्यवस्था वा धर्मशास्त्र मा संकाय को एक मा।
को मध्ययुगीन विश्वविद्यालय प्रबन्ध मिलाइयो बाटो, शिक्षा आधुनिक मोडमा वस्तुतः समान। तिनीहरूले कुनै खुला थिए। विद्यार्थी र धनी परिवारबाट प्रभुत्व बच्चाहरु हुनत, तर त्यहाँ गरिब वर्ग बाट धेरै मानिसहरू थिए। तर, मध्ययुगीन विश्वविद्यालयहरु गर्न भर्ना को क्षण देखि, र धेरै वर्ष को लागि आयोजित डाक्टर को उच्चतम डिग्री प्राप्त गर्न, र किनभने धेरै केही अन्त गर्न यो तरिका पारित गरेको छ, तर स्नातक दर भाग्यमानी र सम्मान प्रदान र तीव्र क्यारियर को संभावना।
धेरै राम्रो शिक्षकहरू को खोज मा धेरै जवान मान्छे अर्को एक शहर देखि सार्न, र छिमेकी युरोपेली देशहरूमा स्थानन्तरण। यो भाषा को अज्ञानता तिनीहरूले छाडेनन् भने हुनुपर्छ। युरोपेली मध्ययुगीन विश्वविद्यालयहरु विज्ञान र चर्चका भाषा मानिन्छ थियो ल्याटिन, मा प्रशिक्षित थिए। धेरै विद्यार्थी अक्सर जीवनमा नौलो नेतृत्व, र यसैले उपनाम "Vagant" प्राप्त - "। भटक" तिनीहरूमध्ये जसको काम अहिले सम्म ठूलो चासो समकालीनहरूको कारण उत्कृष्ट कवि थिए।
विद्यार्थीहरूको दैनिक जीवन सरल: बिहान लेक्चर मा, र साँझमा - सामाग्री को पुनरावृत्ति। सँगै गैर-अस्थिर मध्य युग को विश्वविद्यालयहरु मा स्मृति तर्क गर्ने क्षमता भुक्तान ध्यान धेरै अभ्यास। यो कौशल दैनिक विवादहरु समयमा अभ्यास थियो।
तथापि, मात्र प्रशिक्षण ती को मध्ययुगीन विश्वविद्यालयहरु जान असल भाग्य थियो जो जीवनमा कोर्न लिए। यो समारोह र हल्ला चाडहरूमा लागि समय थियो। ती दिन विद्यार्थीहरू तिनीहरूले ज्ञान र फेला सुरक्षा आउटसाइडर्स देखि संग, आफ्नो जीवन को सबै भन्दा राम्रो वर्ष बिताए, आफ्नो शैक्षिक संस्थाहरू धेरै रुचाउनु छन् यहाँ। तिनीहरूले "अल्मा मेटर" भनिन्छ।
विद्यार्थी सामान्यतया सँगै विभिन्न क्षेत्रहरु को एक नम्बर देखि विद्यार्थी ल्याउन, राष्ट्रका वा समूहहरु को सानो समूह भेला। सँगै, तिनीहरू एक घर, धेरै कलेजहरु बस्थे छन् तापनि भाडामा सक्नुहुन्छ - कलेज हो। उत्तरार्द्ध पनि राष्ट्रियता अनुसार गठन गर्न गर्छन: एक राष्ट्रिय समूहका प्रतिनिधिहरु प्रत्येक जाँदै।
युरोप मा विश्वविद्यालय विज्ञान
Scholastica को एघारौँ शताब्दीमा यसको गठन थाले। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता कारण विश्व ज्ञान शक्ति मा अपार विश्वास छलफल भएको थियो। तथापि, मध्य युग मा समय को खण्ड यसलाई अन्तिम र भूल छलफल थिए प्रावधान जो एक विश्वविद्यालय विज्ञान dogma, भयो। को 14-15 शताब्दीयौंदेखि मा। केवल एक तर्क प्रयोग र पूर्ण कुनै पनि प्रयोग अस्वीकार, जो scholasticism, पश्चिमी युरोप मा प्राकृतिक वैज्ञानिक विचार को विकास मा एक स्पष्ट ब्रेक परिणत गर्न थाले। लगभग पूर्ण मध्ययुगीन विश्वविद्यालय को गठन को Franciscan र डोमिनिकन आदेश भिक्षुहरूले को हात मा त थियो। समय को शैक्षिक प्रणाली पश्चिमी सभ्यता को गठन को विकास मा एक मजबूत प्रभाव थियो।
मात्र शताब्दीपछि मध्ययुगीन विश्वविद्यालयहरु पश्चिमी युरोप को सामाजिक चेतना वृद्धि, वैज्ञानिक विचार को प्रगति र व्यक्तिगत को स्वतन्त्रता प्रचार गर्न थाले।
शिक्षा को स्थिति प्राप्त गर्न, संस्था यसको सिर्जना स्वीकृत एक पोप साँढेको थियो हुनुपर्छ। यो उर्दी मा पोपको विश्वविद्यालय को अस्तित्व legitimizing, deduced स्थानीय सांसारिक वा Ecclesiastical अख्तियारको नियन्त्रण संस्थाले। व्यवस्था को शैक्षिक संस्थाहरू पनि प्राप्त विशेषाधिकार पुष्टि भएको छ। यी हस्ताक्षर विशेष कागजातहरू वा dads, वा Monarchs थिए। व्यवस्थापन फारम, आफ्नै अदालत छ अनुमति र शैक्षिक डिग्री र सैन्य सेवाबाट विद्यार्थीहरूको जारी दिनु अधिकार - सुअवसर शैक्षिक संस्थाहरू को असुरक्षित स्वतन्त्रता थियो। यसरी, मध्ययुगीन विश्वविद्यालयहरु पूर्ण स्वतन्त्र संगठन हुन्छन्। प्रोफेसर, विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थाहरू को कर्मचारीहरु, एक शब्द मा, सबै कुरा अब शहर अधिकारीहरूले पालन छ, तर केवल rector र deans गर्न चयन गरियो। र विद्यार्थीहरू केही अपराध अनुमति छ भने, यो बस्ती को व्यवस्थापन मात्र तिनीहरूको भर्त्सना र दोषी दण्ड गर्न अनुरोध गर्न सक्छ।
मध्ययुगीन विश्वविद्यालयहरु राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिइएको थियो। तिनीहरूले धेरै चिरपरिचित तथ्याङ्कले सिकाउनुभयो थिए। यी शैक्षिक संस्थाहरू स्नातकहरूलाई थिए प्रति Abelyar र Duns Skott, Petr Lombardsky र Vilyam Okkam, Foma Akvinsky र धेरै अन्य।
नियम, एक संस्थाले यस्तो एक स्नातक ठूलो क्यारियर राखेका थिए। साँच्चै, एक हात मा, मध्ययुगीन विद्यालय र विश्वविद्यालय सक्रिय चर्च सम्पर्कमा छन्, र अन्य मा, विभिन्न शहर को प्रशासनिक कर्मचारी को विस्तार र शिक्षित र योग्य मान्छे को लागि मांग वृद्धि साथ। धेरै पूर्व विद्यार्थीहरू Notaries, अभियोजन, clerks, न्यायाधीशहरूले वा वकिल काम गरे।
मा मध्य युग त्यहाँ माध्यमिक र उच्च शिक्षा को कुनै अलग थियो, त्यसैले मध्ययुगीन विश्वविद्यालय संरचना दुवै वरिष्ठ र कनिष्ठ संकाय समावेश। प्राथमिक विद्यालयमा 15-16 वर्ष पुरानो जवान ल्याटिन मानिसहरूलाई गहन प्रशिक्षण पछि, तिनीहरूले प्रिपेरेटरी स्तर हस्तान्तरण गरेका थिए। तिनीहरू यहाँ दुई चक्र मा "सात उदार कला" अध्ययन। यी "trivium" (व्याकरण, लफ्फाजी र dialectic) र "Quadrium" (गणित, संगीत, खगोल विज्ञान र ज्यामिति) थिए। तर केवल दर्शन पाठ्यक्रम अध्ययन पछि विद्यार्थी, कानुनी चिकित्सा वा Theological विशेषता को वरिष्ठ संकाय प्रविष्ट गर्ने अधिकार थियो।
आज, मध्ययुगीन विश्वविद्यालयहरु को परम्परा आधुनिक विश्वविद्यालयहरु मा प्रयोग गरिन्छ। Extant प्रशिक्षण योजना ती दिनमा दुई semesters मा छैन विभाजित थियो जो वर्ष को लागि माथि कोरिएका र दुई unequal भागमा। ठूलो साधारण अवधि इस्टर सम्म अक्टोबर देखि लामो र सानो - जुन को अन्त गर्न। semesters मा शैक्षिक वर्ष को विभाजन मात्र केही जर्मन विश्वविद्यालयहरु मा मध्य युग को अन्त मा देखियो।
त्यहाँ शिक्षण तीन मुख्य प्रकारका छन्। Lectio, वा लेक्चर, पूर्ण र क्रमबद्घ प्रदर्शनी गठन मा एक विशेष शैक्षिक विषय केही घण्टा अवधिमा पूर्व-सेट विधान वा विश्वविद्यालय को विधान बाहिर। तिनीहरूले साधारण वा अनिवार्य पाठ्यक्रम र असाधारण, वा थप विभाजित छन्। वर्गीकृत नै टोकन र शिक्षकहरू द्वारा।
नौ बिहान सम्म प्रारम्भ देखि - उदाहरणका लागि, अनिवार्य लेक्चर बिहान सामान्यतया प्रबन्ध छन्। यो समय यो थप सुविधाजनक र विद्यार्थी ताजा सेना को लागि डिजाइन गरिएको थियो। पालो मा, लेक्चर दिउँसो असाधारण विद्यार्थी थिए। तिनीहरूले छ मा सुरु र दस बजे मा समाप्त भयो। पाठ एक वा दुई घण्टा लामो थियो।
को मध्ययुगीन विश्वविद्यालयहरु को परम्परा
को मध्ययुगीन विश्वविद्यालय शिक्षकहरूको मुख्य कार्य, कि पदहरू विभिन्न भिन्न collating, पाठ्यक्रम आवश्यक व्याख्या दिन तथ्यलाई थियो। विद्यार्थीहरू को नियमहरू सामाग्री को पुनरावृत्ति, वा ढिलो पढाइ आवश्यक निषेध गरेका थिए। तिनीहरूले ती दिनमा धेरै महंगा थिए जो पुस्तकहरू संग लेक्चर, आउन मानिन्छ थिए, त्यसैले schoolboys भाडामा तिनीहरूलाई लिए।
पहिले नै अठारौँ शताब्दीमा, विश्वविद्यालय पाण्डुलिपिहरूमध्ये जम्मा गर्न थाले र आफ्नो नमूना पदहरू सिर्जना गर्न तिनीहरूलाई प्रतिलिपि। दर्शकहरुको लामो पर्याप्त त्यहाँ छैनन्। बोलोग्ना - - यो चौधौँ शताब्दीमा सिर्जना गर्न थाले पछि प्राध्यापकहरू स्कूल परिसर संगठित गर्न थाले जहाँ पहिलो मध्ययुगीन विश्वविद्यालय सार्वजनिक भवन लेक्चर लागि कोठा समायोजित गर्न।
र अघि, विद्यार्थीहरू एक ठाउँमा समूहीकृत थिए। उदाहरणका लागि, पेरिस, यो Foir बाटो, सडक वा पराल, थियो दर्शक आफ्नो शिक्षकको खुट्टा देखि पराल मा भुइँमा बसे किनभने यो नाम भनिन्छ। लामो तालिका सक्छ बीस मान्छे सम्म फिट जो पछि - पछि समानता दल देखा पर्न थाले। विभाग पनि dais मा संगठित गर्न थाले।
शक्ति को जिम्मेवारी
को मध्ययुगीन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू देखि स्नातक पछि जो हरेक जातिलाई केही मालिकको लिए, परीक्षा राखिएको। निरीक्षण परीक्षा डीन। विद्यार्थीलाई म सबै सिफारिस पुस्तकहरू पढ्न र विवाद मात्रा को विधान को प्रावधान सहभागी व्यवस्थित छन् भनेर प्रमाणित गर्न भएको थियो। आयोग र रुचि स्नातकहरूको व्यवहार। यी कदम को सफल बित्दै जाँदा पछि विद्यार्थी सबै प्रश्नहरूको जवाफ मानिन्छ थियो जो एक सार्वजनिक बहस, गर्न स्वीकारे छ। फलस्वरूप, यो पहिलो स्नातक गरेको डिग्री तोकिएको छ। मास्टर सहयोग गर्न उहाँले थियो दुई शैक्षिक वर्ष सही सिकाउन प्राप्त गर्न। पहिले नै आधा एक वर्ष पछि उहाँले पनि, एक मालिक डिग्री द्वारा नियोजित थियो। एक स्नातक सपथमा र भोज, एक व्याख्यान दिन दलदल गर्न हुनुपर्छ।
सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय को इतिहास फिर्ता बाह्रौँ शताब्दीमा गर्न तिथिहरु। यो फ्रान्स इटाली र पेरिस बोलोग्ना जस्ता संस्थाहरू उत्पत्ति भएको त थियो। को तेह्रौँ शताब्दीमा त्यहाँ बेलायतमा अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज, मंटपेलीयर, टूलूस छन्, र चौधौँ शताब्दीमा XIV पहिलो विश्वविद्यालयहरु चेक गणतन्त्र र जर्मनी, अस्ट्रिया र पोल्याण्ड मा देखियो। प्रत्येक संस्थाले मा यसको आफ्नै परम्परा र विशेषाधिकार थियो। को पन्ध्रौँ शताब्दीको अन्तसम्ममा त्यहाँ तीन प्रकारका मा जसलाई एक शिक्षकको तलब प्राप्त आधारमा, युरोप मा संरचित छन् जो एक सय विश्वविद्यालय थिए। पहिलो बोलोग्ना थियो। यहाँ विद्यार्थीहरूलाई आफूलाई भाडामा र शिक्षकहरू लागि भुक्तानी। दोस्रो प्रकार विश्वविद्यालय शिक्षकहरू चर्च आर्थिक सहायता जहाँ पेरिस, को थियो। अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज र मुकुट, र राज्य द्वारा समर्थित। म यो वास्तवमा तिनीहरूलाई 1538 मा monasteries को dissolution र यी आधारभूत अंग्रेजी क्याथोलिक संस्थाहरु को पछि हटाउने बच्न मदत भन्न पर्छ।
संरचना को सबै तीन प्रकार आफ्नै विशेषताहरु छन्। उदाहरणका लागि, बोलोग्ना मा, उदाहरणका लागि, विद्यार्थी वस्तुतः सबै कुरा नियन्त्रण, र यो वास्तवमा अक्सर शिक्षकहरू ठूलो असुविधा बुझाइएको छ। पेरिस, यो वरिपरि अन्य तरिका थियो। यो किनभने शिक्षकहरू चर्च विश्वविद्यालय मा धर्मशास्त्र को मुख्य विषय थियो तिर्न भन्ने तथ्यलाई छ। तर बोलोग्ना मा विद्यार्थीहरूको सांसारिक अध्ययन भन्दा बढी चयन गर्नुहोस्। यहाँ, मुख्य विषय व्यवस्था थियो।
लोगारिदम: कसरी गणना गर्ने?
कसरी कलेज उच्च स्कूल पछि जाने: रसिद, कागजात, सुझावहरु क्रम
अनुमानित संकेत संग अपराध र अपराध को योग्यता को
कर्ट कोबेन गरेको आत्महत्या वा हत्या को मृत्यु को कारण?
निबंध "जीवनको अर्थ" - प्रत्येक महत्व बारे
के तपाईँको फोन हेडफोनको "हेर्नुहोस्" छैन भने: सुझाव र निर्देश
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई जोर्डन
सूर्य मा तात्दै को मुख्य लक्षण के हो
जनावर संसारमा सबै भन्दा ठूलो भूमि स्तनधारी
Perinatal केन्द्र, बेल्गोरड डाक्टर र तिनीहरूलाई बारेमा समीक्षा
"Ollie" भेट्नुहोस्, पहिलो मिनिबस3डी प्रिन्टरमा छापिएको छ